Kumasango eentaba zeBieszczady
Rzepedź, Województwo podkarpackie, Poland
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKrystyna
Indawo epholileyo, enelanga, ecocekileyo neshushu i-U Bram Bieszczad ekhoyo nangaliphi na ixesha lonyaka.
Kumda weBeskid Niski kunye neBieszczady kunye nokuphosa ilitye ukuya eSlovakia (ubhiya kunye namadombolo) kunye nomgama okhuselekileyo ukusuka kwiindawo ezixakekileyo kunye neendawo ezixineneyo, kodwa kungekude kuzo zonke iindawo ezikhangayo zeBieszczady. Iindlela zebhayisekile, iindlela zohambo, iKarlików ski lift. Kukho ithuba lokuqesha iibhayisekile.
Ukuba ufuna ukuthatha ikhefu kwiidolophu kunye nokuphithizela, yiva isandi somlambo ngaphambi kokulala, ujabulele umoya ococekileyo kwaye ube nombono onomdla ovela kwifestile kwaye usebenzise yonke imidiya ngexesha elinye - oku indawo yakho
Kukho iivenkile, ikhemesti kunye nendawo onokuthi uphumle kuyo ngoxolo.
4.76 ·Izimvo eziyi-33
4.76 · Izimvo eziyi-33
Kumda we-Low Beskids kunye neeNtaba ze-Bieszczady, ukuphosa ilitye ukuya eSlovakia (ibhiya kunye ne-dumplings) kunye nomgama okhuselekileyo ukusuka kwiindawo ezingxolayo kunye nezixineneyo. Uya kufika kuzo zonke iindawo ezinomtsalane e-Bieszczady ngexesha elifutshane.
Uya kufika eKomańcza ngeenyawo, kwaye ukuba unamandla aneleyo, unokufikelela kumachibi aseDuszatyńskie.
Umbuki zindwendwe ngu- Krystyna
Sibonelela ngoxolo olupheleleyo kunye nokuzimela. Sifumaneka ngefowuni. Umgcini welo fulethi uhlala elumelwaneni kwaye uyafumaneka ukuze ancede
Iilwimi: Norsk, Polski
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$251